Vita farany - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Tanana am-baravarana anatiny
Tanana am-baravarana minimalista
Tanana am-baravarana maoderina
Tanana mora vidy lafo vidy
Tanana malefaka varavarana fitaratra fitaratra
Tanana am-baravarana tsy mahazaka zaza
Fitaovana Hardware Hardware
Maherin'ny 20 ny famaranana ny fitsaboana amin'ny tany, ny famaranana isan-karazany dia ahafahanao misafidy sy atambatra amin'ny fomba amam-baravarana sy toerana malalaka. "Ny mpanjifa dia manana safidy maro karazana ary mety hisy fiatraikany amin'ny fomba fisarihana sy fampitomboan'ny orinasan-tsosialy ny mpanjifany, ny fananganana mpanjifa sarobidy ary ny fiatraikany amin'ny fomba fanapahan-kevitry ny olona mividy." Miaina amin'ny fotoana feno safidy isika.
Ho fanampin'izay, mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpamorona sy ny mpamokatra varavarana, ny vatan'ny varavarana YALIS, ny vatam-baravarana, ny vavahady, ny savily amin'ny varavarana dia azo atao amin'ny famaranana ihany koa, izay mahatonga ny fitaovan'ny varavarana ho mitovy fanamiana sy manatsara ny hatsarana.
Ny fotoana fitsapana sira YALIS dia manodidina ny 96 ora. Ny mpanjifa sasany dia monina any amin'ny faritra amorontsiraka, ny toetr'andro mando dia mitaky fangatahana avo kokoa amin'ny fanoherana ny okididra. Azontsika atao ihany koa ny manao ny fotoana fitsapana sira mandritra ny 200 ora mahery.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA +86 135 6061 4928
ADDRESS Rd Songbai No.77, Hefeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Provinsi Guangdong, PRChina 528415